डन्डेलियन्सको अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभहरू
समय: 2019-08-27 दृश्य:
Dandelion को बारे मा
Dandelions छ मानिन्छ को बारे मा विकसित 30 मिलियन वर्ष पहिले यूरेशियामा. डान्डेलियन्स प्रचुर मात्रामा समावेश गर्दछ भिटामिन र खनिज, विशेष गरी भिटामिन एक, सी, and K, र राम्रो स्रोत हो क्या�र�ियम, पोटासियम, फलाम, and मैंगनीज.
तिनीहरू मानव द्वारा प्रयोग गरिएको छ खाना र एक को रूप मा जडिबुटी ईतिहासमा. चीनमा, डन्डेलियन एक सामान्य रूपमा प्रयोग गरिने परम्परागत चिनियाँ औषधि हो. र यो औषधीय मूल्य बिभिन्न मेडिकल पुस्तकहरुमा सामेल गरिएको छ.
ऐतिहासिक रूपमा, डन्डेलियन विभिन्न प्रकारका औषधीय गुणहरूको लागि मूल्यवान थियो, र यसले फार्माकोलोजिकली सक्रिय यौगिकहरूको संख्या समावेश गर्दछ. डन्डेलियन युरोपमा जडिबुटी उपचारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, उत्तर अमेरिका, र चीन.
यो जडीबुटी औषधिमा हेमोर्रोइड्स फूलिएको विषको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ, कफ, दुखेको घाँटी, फोक्सोको थुंकी, आन्द्राशयको नाल, न्यानो तातो पीलिया, तातो टपकाइ दुख्ने, तीव्र मस्टिटिस, लिम्फैडेनाइटिस, थूक, बिच्छी विष, तीव्र नेत्रश्लेष्मलाशोथ, चिसो ज्वरो, तीव्र टन्सिलिटिस, तीव्र ब्रोंकाइटिस, ग्यास्ट्रिटिस, हेपेटाइटिस, कोलेसिटाइटिस, मूत्र पथ संक्रमण, प्रोस्टाटाइटिस, किराको टोकाइ र कलेजो समस्या.
साथै, डान्डेलियनमा पनि मूत्रवर्धकको कार्यहरू छन्, रेचक, पीलिया, पाचन र भूक बढावा. यसले पेट र ग्रहणी अल्सरको उपचार गर्न सक्छ. र क्यान्सर रोक्न सक्छ, पेटको क्यान्सर, एसोफेजियल क्यान्सर र विभिन्न ट्यूमर.
खानाको लागि प्रयोग गरिएको
डान्डेलियनमा प्रोटिन हुन्छ, मोटो, कार्बोहाइड्रेट, तत्वहरू र भिटामिनहरू ट्रेस गर्नुहोस्. यसको धनी पोषण मूल्य छ. यो कच्चा खान सकिन्छ, भुटेको, र सूपमा बनेको. यो भिटामिन ए र सी र खनिजमा समृद्ध छ, यसले खानाको रूपमा खाँदा अपच र कब्जमा असर गर्दछ.
डन्डेलियन पराग हुन सक्छ एलर्जी प्रतिक्रिया जब खाए, वा संवेदनशील व्यक्तिहरूमा प्रतिकूल छाला प्रतिक्रिया। सम्पर्क dermatitis ह्यान्डलिंग पछि पनि रिपोर्ट गरिएको छ, सायद डाँठ र पातहरूमा ल्याटेक्सबाट. यसको उच्चको कारण पोटेशियम स्तर, डन्डेलियनले पनि यसको जोखिम बढाउन सक्छ हाइपरक्लेमिया जब पोटेशियम-स्पेयरिंग डायरेटिक्सको साथ लिइन्छ.
अघिल्लोमेदोनकेयरले १० औं चीनमा भाग लिएको थियो (गुआन्झाउ) अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा उद्योग प्रदर्शन
अर्कोसाइटिका दर्दको लागि प्राकृतिक उपचार